Shaxda Shiinaha gacanta taagan xumbo taabasho dareere otomaatig ah saareyaasha qeybiyeyaasha iyo alaableyda | Zhaolong
Shaxda taagan xumbo gacanta taabashada dareeraha si toos ah ...
Saabuun qaybiyaha Sirdoonka Taabasho La'aanta ah
Carruurta qoys washin xumbo induction caqli guriga ...
Auto dareeraha dareeraha dareeraha Touchless Auto xumbo Sidaas ...
Miis taagan xumbo gacanta taabasho la'aan saaraha saabuunta xumbo dareere ah
Automatic xumbo qaybiyaha
Naqshad duck qurux badan ayaa carruurta ku dhiirrigelisa dhaqidda gacmaha!
Dareemiyaha degdegga ah ee 'infrared sensor' oo leh kala duwanaansho ballaadhan
Qalabka saabuunta aan gacmaha lahayn ee nadaafadda leh ayaa wasakhda, wasakhda, iyo jeermiga ka ilaaliya aagga “nadiif” ah
Meel u dhow Sensor infrared
Batariga Lagu Shaqeeyo
Waxay ubaahantahay baytariyada 3-AA Alkaline (kuma jiraan)
Wuxuu ubaahanyahay maraq xumbo keliya
Isticmaal kaliya Saabuunta dareeraha ah ee FOAMING. Waxaad isticmaali kartaa saabuun dareere ah oo caadi ah kuna milo cabir ahaan 3: 1 (Biyaha: Saabuunta) ama aad iibsato saabuunno xumbo dareere ah oo horay loo sameeyay. (Saabuun Laguma Darin
Biyaha u adkaysta: IPX4
Taabo dareeraha gacanta Iftiinka cagaaran ee cagaaran macnihiisu waa Diyaar in la bixiyo saabuunta.
Red LED Light micnaheedu waa batari yar.
Si Aad U Isticmaasho
- Mar haddii baytariyada la rakibo, waxaa fiican in qalabka wax lagu kiciyo laga soo qaado gadaasha - iyadoo gacanta loo jeedinayo sanka (dareeraha) si loogu dhaqaaqo meesha la doonayo ee saxanka. Haddii kale, haddii laga haysto dhinac ama xagga hore, dareeraha infrared-ka ee ku dhow ayaa kicin doona, oo saabuun ayaa la bixin doonaa.
-Garo gacanta hoostiisa garabka Duck si aad ugu buuxisid saabuunta xumbaynaya. Iftiinka iftiinka ayaa cariiri doona marka baytariyada ay buuxsamaan.
-Ulaab gacanta ku soo celi markale dareeraha haddii aad rabto saabuun badan oo la bixiyo. Sensor wuxuu noqon doonaa buluug.
-LED Iftiinka iftiinka ayaa isu rogi doona markii baytariyada hooseeyaan.
Qaabka Badeecada: QQ318
Danab lagu qiimeeyay ： 4.5V
Miisaanka saafiga: 0.59 .lbs. bilaa batariyo
Cabirka: 3.74 "L * 3.15" W * 7.1H ”
1.Touchless dareeraha infrared-ka deg-degga ah. Waxay baabi'isaa faddarada jeermiska iskutallaabta iyadoo awood u siineysa saabuunta xumbada si otomaatig ah loo bixin karo.
2.IPX4 Biyo-mareenka iyo ABS-ka dibedda waxay xaqiijineysaa in saabuunta soo saareysa ay sii wadi doonto inay shaqeyso marka mashaakilku dhaco markii si kama 'ah biyo loogu tuuro.
Dareemka infraredka jawaabta degdega ah ee 3.Q ayaa sifiican ugu bixin kara saabuunta xumbada 2.5 ilbiriqsi gudahood marka la hawlgeliyo. Waqtiga jawaab celinta degdega ah micnaheedu waa dhaqidda gacmuhu waa nadaafad iyo dadaal la'aan.
4.Mapti-isticmaalka Saabuunta Mashiinka waxaa loo isticmaali karaa saabuunta weelka lagu dhaqo, mashiinka-saabuunta gacanta, ama qubayska iyo mashiinka musqusha lagu shubo.
Qaabka ： a-318
Shayga No. Sharaxaadda alaabta FOB NINGBO USD / kumbiyuutarada Xirmo
QQ318 Dhaqdhaqaaq otomaatig ah oo firfircoon Saabuunta Qalabka duro Finish 5.05 duro Finish 4.88 duritaanka Dhameyso 4.65 mid kasta oo ku jira sanduuqa boosta cad; ka dibna 24PCS / CTN, Cabbirka kartoonka: 412 * 275 * 245MM; 22,200PCS / 925CTNs / 20 '; 47,040PCS / 1960CTNS / 40 ';
Demi On / OFF
Tusiyaha LCD：Markay shidan tahay ama shaqeyneyso iftiinka LCD waa cagaar. Markay dansan tahay ama baytariyadu hooseeyaan, muuqaalka LCD waa casaan.
Biyaha u adkaysta：IPX4
Mugga Saabuunta：Ugu badnaan 220ML, kuma jiraan
Awoodda Batariga：3 Batariyada AA (kuma jiraan), waxay u shaqeysaa 9 saacadood si isdaba joog ah.
Cabbirka Model（L: H: W): 95 * 180 * 80mm
Miisaanka: 266.4g (bilaa batari la'aan)
Bottle Dhalada ku wareeji dhinaca midig si aad u furto.
Ly Si khafiif ah u riix qolka baytariga si aad uga saarto, ku rakib baytariyada cusub ee 3-AA.
Container Weelka ku buuxi LINE saabuun dareere ah. Ka dib ku dar biyo si aad dhalada ugu buuxisid korka. Farta farta ku fiiq, si qafiif ah u rux si aad ugu qasto saabuun iyo biyo.
Bottle Gali dhalada qalabka wax lagu shubo oo u leexo bidix si aad u xirto (u dhaqaaq dhanka bidix badankood)
⑤ Si fudud u dhaji nalka tusiyaha si aad u daarto qaybiyaha. Xakamaynta heerka laba-geesoodka ah: Iftiinka Cagaarshow Cagaaran: Wuxuu shidaa qaybinta saabuunta. Iftiinka Guduudka Cas - Wuu demiyaa Qiyaastii 1.2ml ayaa la bixiyaa mar kasta.
Hand Hoos u dhig farjiga shinbiraha si aad u hesho saabuun xumbo leh
【Taabasho Bilaash ah & 2.5s Jawaab Deg Deg ah】Marka loo barbardhigo mashiinka kale ee saabuunta lagu shubo, qalabkeena saabuunta otomaatiga ah wuxuu qaatay dhaqdhaqaaqa saxda ah ee infrared-ka iyo teknoolojiyada ogaanshaha dareeraha PIR, taas oo ku siinaysa khibrad aan taabasho lahayn oo saabuun si joogto ah u bixin doonta oo si dhakhso ah ugu gudub 2.5 ilbidhiqsi oo keliya
【Habka Is-nadiifinta】 Kaliya taabo badhanka awoodda, qalabka saabuunku wuxuu si otomaatig ah u sii deyn doonaa looshinta gacanta ee xumbo 2.5 ilbiriqsi gudahood markii dareeraha uu ku ogaado gacmahaaga inuu la kulmo meelo kala duwan oo aad u baahan tahay. Qalabaysan awoodda 220ml, looma baahna in dib loo buuxiyo freqsi waadax ah.
【Waara oo Sanado soconaya】Ka samaysan waxyaabo tayo sare leh oo ABS ah, mashiinka saabuunta waa mid waara oo leh muddo dheer isagoo isticmaalaya cimriga. Qalabka saabuunta waxaa ku shaqeeya3 Batariyada AAA (Kuma jiraan), hal bedel ayaa la isticmaali karaa ilaa 3 bilood.
【IPX6 Biyo mareenka】Qalabka saabuunku wuxuu ku qalabeysan yahay IPX6 tiknoolajiyad biyo-diid ah iyo dheecaan la'aan ah si looga hortago saabuun ama biyo ka soo daaya golayaasha wareegga, gaar ahaan meelaha qoyan sida musqusha ama saxanka jikada.
【Si Fudud Loo Isticmaalo Iyo Codsi Balaadhan】Mar dambe uma baahnid inaad taabatid mashiinka saabuunta, kaliya gacantaada hoos dhig dareemaha si aad u isticmaasho qalabka saabuunta si looga fogaado infekshinka iskutallaabta. Aad ugu haboon musqulaha, jikada, xafiisyada, iskuulada, airports, isbitaalada, xanaanooyinka, hoteelada iyo maqaayadaha iyo meelaha kale ee bulshada.
Talaabooyinka Lagu Dhaqo Gacmahaaga
Ku maydh calaacasha gacanta timirta
Rgadaasha gadaasha twuxuu ku gacan qabtaa calaacasha
Cxoqid toban farood
Tsuulka ku wareeji
Rfarida oo la jiido
Hore: Saabuun qaybiyaha Sirdoonka Taabasho La'aanta ah
Xiga: Jirka Massager Gun Cadaadiska Cadaadiska Cadaadiska Gun
Intelligent Touchless Automatic xumbo Saabuun Di ...
Carruurta xumbo induction caqliga guriga w ...
Auto dareeraha dareeraha dareeraha Touchless Auto Fo ...